ဆုံးပါးသွားတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ညီမလေး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ A4 ကျော်စွာ – အနုပညာရပ်ဝန်း
” ဒီနေ့(၄)နာရီမှာဆုံးသွားရှာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ညီမလေးပါ…. သူ့အသက်ရှင်စဉ်က သူအရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းနဲ့ သူ့အပြုံးများကို နောက်ထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတာ…. သေချာသွားတဲ့အတွက် ပြောမပြတတ်လောက်အောင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်….. စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ညီမလေးမို့ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်…. သူ့အတွက်ဝန်းရံပေးခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်” ဆိုပြီး ညီမလေးအသက်ရှိစဉ်တုန်းက ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗွီဒီယိုလေးနဲ့အတူ စိတ်မကောင်းစွာ မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. အချိန်မတန်ခင် လူ့လောကထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ညီမလေး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ A4 ကျော်စွာနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ညီမလေးရေ။
သက်ကြီးလူရွှင်တော်ကြီးများအတွက် အလှူငွေ( ၁၀)သိန်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေတိုး…